Ubuntu ၏ local repository ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ Linux မှ
ကျွန်ုပ်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းသိုလှောင်ရုံများသို့ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ။ ဤသည်က repository ကို ၀ င်စေသည် ပြင်ပ hard drive သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းရေး HDD တွင်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ HDD တွင် ArchLinux repo သည် 64bits (30GB အထက်) နှင့် Debian Wheezy 32bits (40GB ကျော်) အတွက် repo ရှိသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ချိန်က install လုပ်ထားသော distros များ၊ packets များကို update လုပ်ရန်၊ packets အသစ်များနှင့် internet ရှိ repositories မှအခြားသူများကို install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ repository အတွက်အင်တာနက်ကိုမရှာရန် distro ကိုပြောရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ repository ကိုအသုံးပြုရန်ပြောရမည်။
sources.list ရှိ repository ကိုပြုပြင်ပါ
အောက်ပါအဆင့်များသည်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်များလိုအပ်သည်။ သူတို့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Ubuntu ကို (ဥပမာ) သူတို့သည် sudo ကိုသူတို့ရိုက်သည့် command line တိုင်းတွင်ထားသင့်သည်
1. Terminal (console, bash, shell, etc) ကိုဖွင့်ရမည်။ ဒီမှာငါတို့ရေးမည်
2. စာသားဖိုင်တစ်ခုဖွင့်လာလိမ့်မယ်၊ သူ၌ရှိသမျှအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးဖြည့်ပါ။
deb ဖိုင်: /// media / hdd / repo တိကျသောအဓိကစကွဝmultာ multiverse ကန့်သတ်ထားသော deb ဖိုင်: /// media / hdd / repo တိကျ - မွမ်းမံအဓိကစကွဝmultာ multiverse ကန့်သတ် deb ဖိုင်: /// media / hdd / repo တိကျ - လုံခြုံရေးအဓိကစကွဝuniverseာ multiverse ကန့်သတ်ထားသော deb ဖိုင်: /// media / hdd / repo တိကျစွာ - backports ပင်မစကြဝmultာ multiverse ကန့်သတ်ထားသော deb ဖိုင်: /// media / hdd / repo တိကျစွာ - အဆိုပြုထားအဓိကစကြဝmultာ multiverse ကန့်သတ်
ဒီမှာငါရပ်လိုက်မယ် ဤသည်မှာသီအိုရီအရကျွန်ုပ်၏ပြင်ပ HDD ၌ရှိသော Ubuntu တိကျသောသိုလှောင်ရုံသို့သွားသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ / မီဒီယာ / ဟdd / HDD ကိုတပ်ဆင်ထားသည့်ဖိုင်တွဲဖြစ်သည်၊ ထို့နောက်သိုလှောင်ရာနေရာ (ဆိုလိုသည်မှာရေငွေ့များ၊ ရေကူးကန်များနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည့်ဖိုလ်ဒါ) ကိုခေါ်သည်။ repoငါသုံးနေသော Ubuntu ၏ဗားရှင်းသည်အတိအကျဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပထမစာကြောင်းသည် distro ၏အမည်နှင့်တူသည် သေချာသော (၁၂.၀၄)၊ နောက်လာမည့်လိုင်းများသည် repo ၏အခြားဌာနခွဲများ (နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ လုံခြုံရေးစသည်) ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကန့်သတ်အဓိကစကွဝuniverseာ
3. ဖိုင်ကို Ctrl + O ဖြင့်သိမ်းဆည်းပြီးအယ်ဒီတာကို Ctrl + X ဖြင့်ထွက်ကြပါစို့
4. ထို terminal ထဲတွင်ပင်အောက်ပါစာကိုရေးပါ။ Local repository indexes စတင်ဖတ်ရှုပုံကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အခုရှင်းလင်းဖို့, 90% လူတွေအမှားလုပ်မိသည်အဘယ်မှာရှိ repository ကို၏လမ်းကြောင်း / လိပ်စာထည့်သွင်းရန်ကြွလာသောအခါ, ကောင်းစွာဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ဤအပိုင်းကိုကောင်းစွာကူးယူရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
repo ကိုပြင်ပ HDD သို့ကူးယူသည်ဆိုပါစို့ "/ media / external" တွင်တည်ရှိပြီး၊ "repository-ubuntu" အမည်ဖြင့် root သို့ကူးယူပြီးဤ folder (repository-ubuntu) အတွင်းရှိဖိုင်တွဲများအတွင်း၌ သိုလှောင်ရုံ (dists, pool, etc) ။
deb file: /// media / external / repository-ubuntu lucid အဓိကစကြ ၀ multာကိုကန့်သတ်ထားသောစသည်တို့ဖြစ်သည်
ကျွန်တော်တို့ကို mini-repository ဖြစ်စေတဲ့ပရိုဂရမ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းလင်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီ GB GB တွေကိုသယ်ဆောင်ဖို့မလိုပါဘူး AptonCD, RepoMan o PSC.
ကောင်းပြီ၊ ထပ်ပေါင်းထည့်စရာမလိုပါ၊ လူများစွာအတွက် HDD တွင်သိုလှောင်ရန်မလိုအပ်သော်လည်း၎င်းလိုအပ်သောသူများအတွက်၎င်းတွင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များရှိနေကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » local Ubuntu repository ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား? မေးခွန်းတစ်ခု - ကျွန်ုပ်သည်ထို repository ကိုမည်ကဲ့သို့ update ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်သည်ချိတ်ဆက်ရန်တစ်နေရာရာရှာရန်လိုသည်။ နောက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဒီ application တွေအားလုံးကို update လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ ဆောင်းပါးကကျွန်မအတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါခဏဆက်သွယ်မှုမရှိဘူး၊ မကောင်းတာကငါ Arch နဲ့ Antergos ကိုသုံးတာပဲ။
ကျူးဘားတွင်နည်းပညာ၏တိကျသောအခြေအနေများ၊ နည်းနည်းလေးပင်လျှင်အင်တာနက်ကိုဘယ်လို ၀ င်ရောက်နိုင်သည်၊ အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုအလုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ၎င်းတို့အားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။ ? ထိုလှပသောတိုင်းပြည်၏လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေများအကြောင်းလေ့လာရန်ကောင်းသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့သင်တောင်းတဲ့အရာကိုတော့သင့်အားမပေးနိုင်ဘူး
ကျနော်တို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး (နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအကြောင်းမဟုတ်ရင်လက်တွေ့ကျတဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်တာမျိုး) ။
သင်ဤမှတ်ချက်တွင်သင်မေးသည့်အရာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ it သင်၏သံသယများကိုရှင်းလင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏အမှု၌ .cu ရှိ repositories ကို update လုပ်ထားသောတစ်နေရာမှအခြားသူများအားလုံးအတွက် .DEB distro နှင့် rsync အတွက် debmirror ဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ နှောင့်နှေးသောအချိန်သည်ထို bandwidth နှင့်အချိုးညီမျှသည်။ လေးစားပါတယ်
သင်သူတို့ကို download လုပ်ရန် debmirror မေ့သွားသည်
ကောင်းကောင်းထောက်ခံပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Debian အတွက်လည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ် (နှစ်မျိုးလုံး APT ကိုသုံးတယ်၊ အမှန်တရားကဗားရှင်းကို disk အဆုံးအထိအဆင့်မြှင့်တင်သင့်တယ်) ။
ငါငါးအတွက်အကူအညီလိုအပ်သည်။ intranet တစ်ခုမှ download လုပ်၍ ubuntu repo ကို windows စက်တစ်ခုမှ disk ထဲသို့ကူးယူခြင်းကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သနည်း။ 😀
ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲသိုလှောင်မှုကို update လုပ်လို့ရပါသလား usb သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာများကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည် repository မှဒေါင်းလုပ်မပါဘဲ driver များကို configure မလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
DesdeLinux မှလှူဒါန်းမှုများနှင့်ဝင်ငွေ။ ကျနော်တို့ကပိုဒေတာကိုဆက်ကပ်